Iflethi okanye indlu ekwicomplex eBergkon - eSonnenalm Mountain Lodge - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex eBergkon - eSonnenalm Mountain Lodge
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguBurkhard
Ngaphezulu kweGröbming kunye nemizuzu engama-20 kuphela ukusuka eSchladming, indlu yethu iku-1,200 m kwiMichaelerberg. Ubume bendalo obunomtsalane bunika amathuba amaninzi okunandipha onke amaxesha onyaka: iparadesi ye-ski yengingqi yaseSchladming-Dachstein ngokubambisana ne-Ski amadé ilungile ngaphandle komnyango. I-Ennstal ibonelela ngeekhosi zegalufa ezinemingxuma emininzi kunye neentlobo ngeentlobo zokhenketho lokukhwela intaba kunye nokuhamba ngebhayisekile. Ukususela ekupheleni kukaMeyi ukuya phakathi ku-Okthobha, iindwendwe zethu zinokonwabela iSchladming-Dachstein Sommercard.
I-Sonnenalm Mountain Lodge yahlaziywa ngokupheleleyo kwaye yanikezelwa ngothando kwiminyaka embalwa edlulileyo. Kwizindlu ezimemayo unokuva ukufudumala, ubuhlobo kunye nokhuseleko lwendlu. Igumbi ngalinye linendawo yokuhlala entle enefenitshala epholileyo kunye nentuthuzelo ephezulu.
Kungakhathaliseki ukuba imozulu injani na phezu rough summit landscape of Ennstal - ziphathe ukuba ikhefu kancinane amaxesha ngamaxesha. Emva kosuku lomsebenzi, umzimba wakho unqwenela ukuvuselelwa. Indawo yethu yokuphila kakuhle kunye neendonga zayo ezenziwe ngamaplanga amadala ikumema ukuba uhlale! Iphunga lomthi wepineyini, elihlobisa iindonga kwi-sauna ebanzi, lizalisa igumbi kwaye libe ne-aura ezolile! Ngelixa ukonwabela amava okuvumba okunesondlo kwee-oyile ezibalulekileyo ngokufakwa, ukujonga kwakho kunokuzulazula kwifestile etshoneyo ukuya kwi-Dachstein massif. Ukuba ufuna kuphela isigaba esifutshane sokufudumala kwizihlunu zakho, ke ikhabhathi yethu ye-infrared iyafumaneka kuwe.
Ukupholisa phantsi, unokuntywila ngesibindi emanzini amatsha emithombo, ashushu nje amadigri ambalwa, okanye ungasebenzisa iishawari zamanzi abandayo. Emva koko ungaphumla kumxholo wentliziyo yakho kwiindawo zokuphumla ezitofotofo kwigumbi lokuphumla. Imbono yeencopho ezichasene neStoderzinken, iKammspitze kunye neGrimming inokukunika imibono yokhenketho lwakho olulandelayo lweentaba! Emva kokuhlwa, i-niches ekhanyisiweyo yeendonga ezifakwe kwiplanga elidala zenza umoya wothando okumema ukuba uhlale. Kodwa ubungafunanga ukuzinyanga ngokutofa?
Ukuhamba nje okufutshane ukuya eMichaelerberghaus. Iindwendwe zonakaliswe izitya ze-rustic hut, ii-pastries zasekhaya kunye nokhathalelo lomntu. Fancy castle romance kunye nesidlo sangokuhlwa samakhandlela? I-Schlosshotel Thannegg e-Moosheim, ezantsi kwe-Michaelerberg, ihlala isincomo!
Umbuki zindwendwe ngu- Burkhard